Isweydaarsiga badan ee polyvinyl
Cusbi polyvinyl butyral leeyahay waafaqid aad u sarreeya, iska caabin qabow, iska caabin abrasion, UV iska caabin ah iyo hawlaha kale. Waxay leedahay adhesion aad u fiican oo leh alwaaxyo, bir, alwaax, galleyda, waxsoosaarka fiberka, iwm. Polyvinyl butyral cusbi ayaa loo isticmaali karaa inay noqoto wax caqabad ku ah dhalooyinka adag. Ku saabsan ...
Habka loogu talagalay diyaarinta polyvinyl butyral
Xasaasiyad isdabajoog ah oo lagu soo saaray falcelinta kiimikada ee polyvinyl butyral, una adkaysata falaadhaha ultraviolet, biyaha, saliidda, iyo gabowga. Waxay ku milmi kartaa methanol, ethanol, ketones, alkanes halogenated, dareerayaasha udugga leh.
Codsiga ugu dambeeya ee nitride boron lix geesood ah
Hexagonal boron nitride (h-bn) dhoobada ayaa ah aaladaha isgaarsiinta microwave ee aerospace, laakiin h-bn waa isku xirnaan isku xiran oo leh isugeyn is-faafid heer-kulkeedu hooseeyo iyo qalafsanaan adag. Badanaa waxaa lagu diyaariyaa qashin-dilid-saxaafadeed kulul. Iyadoo aan lagu daro wax ku darid ...
Farqiga u dhexeeya nitride boron lix geesle ah iyo garaaf cad
Qaab-dhismeedka madadaalada ee boronxrrr nitride iyo graphite waxaa lagu gartaa qaab-dhismeedka lakab-qaabeed u eg garaafid. Guryaha farsamada, boron nitride waa maaddo jilicsan. Si kastaba ha noqotee, adkaanta Mohs, si kastaba ha noqotee, waxay saameyneysaa adkaanta sheyga la riixay ee B2O3 iyo saamiga ...
BHT, BADBAADO IN LOO ISTICMAALO DAAWEYNTA
BHT, oo loo soo gaabiyo ButylHydroxyToluene, waa qayb loo adeegsado dhinacyo badan. Waxay ka caawineysaa in la ilaaliyo tayada cuntada iyo sidoo kale in la wanaajiyo ilaalinta shaybaarada shahwada ee noocyada kala duwan ee xoolaha iyo aadanaha. Xaaladdan oo kale, guryaha ka hortagga fayraska ayaa laga faa'iideystaa, marka lagu daro qaab ahaan ...
Dabeecadda caagga ah ee dabiiciga ah ee xaaladaha oksidheer
Cinjir dabiici ah (CN), oo ah badeecad laga soo dheefay cinjirka 'Hevea brasiliensis', ayaa caan ku ah aalado farsamo, kuwaas oo qaarkood ay ka sareeyaan kuwa la tartamaya. Si kastaba ha noqotee, heerka ugu sarreeya ee qanjirka 'poly' (cis-1,4-isoprene) wuxuu ka dhigayaa mid u nugul kuleylka-kuleylka. Fort ...
Sannadkii 1975, saynisyahannada BASF Werner Hoffman iyo Karl von Fraunberg ayaa ku dhawaaqay daahfurka xeryahooda udugga oo leh diirimaad diiran, murugaysan oo murugaysan iyo tilmaamno miro iyo miraha loo yaqaan 'strawberries'. Waxay u bixiyeen Cyclomusk, laakiin ma noqon mid guuleysata maxaa yeelay lama tartami karin Galaxolide. Horumarinta ...
Soo-helidda iyo Codsiga Maska-miskiinka iyo miskiinka polycyclic
Seynisyahannada iyo cadar-yaqaannada wax badan ayey ka ogaayeen miskiinka makrocyclic illaa 1920-meeyadii, oo ay ku jirto hawshii Professor Leopold Ruzicka (1922-1926), laakiin kuwani aad ayey qaali ugu ahaayeen wax soo saarka ballaaran. Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib, farmashiyayaashu waxay bilaabeen inay raadiyaan habab ka jaban si ay u helaan urta miski dabiiciga ah. ...
Copper Chromite - Codsiyada Guud iyo Isticmaalka
Chromite Copper waa macdan aan dabiici ahayn oo muhiim u ah warshado badan. Waxaa badanaa loo yaqaanaa bur chromium, budada chromite ama bur chromite. Waxyaabaha kiimikada ee CuCr2O4. Dhismahan waxaa laga doorbiday codsiyo badan oo warshadeed sababtoo ah xasilloonida kuleylka badan, resista ...
Waa maxay koromta koramka iyo sida loo sameeyo
Chromite Copper waa iskudhaf aan dabiici ahayn oo leh caanobobo Cu 2 Cr 2 O 5 oo loo isticmaalo in lagu kiciyo falcelinta isku-darka jirka. Maaddadan waxaa markii ugu horreysay lagu sharraxay 1908. Kalluumeysatada waxaa lagu sameeyay Waqooyiga Ameerika oo ay sameeyeen Homer Burton Adkins iyo Wilbur Arthur Lazier oo ku saleysan qayb ka mid ah su'aalaha Germ ...
Waa maxay geedi socodka falcelinta gaarka ah marka ammonium perchlorate loo isticmaalo shidaal ahaan loogu talagalay booska booska?
Gawaarida hawada sare waxay adeegsadaan aluminium bir ah iyo ammonium perchlorate, NH4ClO4, sidii shidaal adag oo loogu talagalay gantaaladeeda dib loo isticmaali karo. Isleegka rakiban ee falcelintu waa: 3 Al (yada) + 3 NH4ClO4 (s) barb2rightAl2O3 (s) + AlCl3 (s) + 3 NO (g) + 6 H2O (g) Isku darka falcelinta waxaa kujira 5.75 g oo Al iyo 7.32 g ee NH4C ...
Waa maxay Ammonium Perchlorate?
Perchlorates waxaa laga helaa deegaanka laba siyaabood oo kala duwan, ama xaalad adag (biyo la'aan) ama ku milma biyaha. Meelaha leh heerarka ugu sarreeya ee kalluumeysiga waa gobollada West Texas iyo Waqooyiga Chile. Perchlorates waa koox atamyo si xun loo eedeeyay oo ka kooban ...